Colonnade bụ etiti ọrụ maka agwaetiti Frangipani. Ọ bụ ihe na-amasịkarị maka mmanya ehihie ehihie, ezumike ezumike, na ịnụ ụtọ imikpu na-enye ume ọhụrụ na ọdọ mmiri infinity mmiri dịụkwụ iri asaa. Na-emegharị site na ụda nke mmiri na-agbapụta site na mmiri mmiri ọdọ mmiri na nsọtụ ọdọ mmiri mgbe ị na-atọ ụtọ ihe omume ụbọchị.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Elephant House mara mma bụ ụlọ e wuru ihe dị ka 100 afọ site na Bali, Indonesia, e bugara ọkara gafee ụwa. Were na ọnwa na-egbuke egbuke na mmiri na ikekwe a stingray na-efegharị ka ị na-enwe mmasị na lobster jikọtara ya na mmanya ọcha jụrụ oyi zuru oke. Ikuku na-ekpo ọkụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbede ọ bụla nke afọ, na-ebuga gị n'ụwa ọzọ.
Akpọrọ Coral Café na Bar aha coral na-esighị ike nke gbara agwaetiti anyị gburugburu. Nọọrọ wee nwee ọmarịcha ntọala alfresco anyị maka nri ụtụtụ, nri ehihie, ihe ọ drinkụ drinkụ na nri ka ị na-enwe mmasị na ọkụ ígwé ojii na eserese mara mma nke nwere ọtụtụ narị mmagharị osisi ejiri aka na-ese si Bali.
Gagharịa ihe karịrị ọkara maịl nke okporo ụzọ ụgbọ mmiri nwere ụkwụ iri n'obosara nwere ọmarịcha oke osimiri, ogige, na echiche mangrove. Malite n'uhuruchi ruo chi ọbụbọ, ụzọ bọọdụ na-abịa ndụ n'ihi ọkụ ịhụnanya na-echetara ihe nkiri Hollywood.
N'April 2022, anyị kwuputara mmecha nke oke osimiri anyị dị n'ofe mmiri, nke anyị kwenyere na ọ bụ osimiri mbụ e buliri elu n'ụwa. N'ịdị elu 90 ụkwụ n'ogologo na 20 ụkwụ n'obosara, Kupu-Kupu Beach na-egosipụta ájá ọcha velvety, nkwụ na-egbuke egbuke gburugburu, na Tipsy Bar anyị.
Cheedị echiche naanị nzọụkwụ isii site n'ihe ndina gị ruo n'ókè ị na-ahọrọ ọdọ mmiri ma ọ bụ oké osimiri. Villalọ ọ bụla nwere snorkels, nri nri, biya, mmanya na sodas - starfish - naanị 7 Villas - mmekọrịta chiri anya.